Ho an’ireo miasa eto an-toerana dia tena tsizarizary ary tsy ampy mihitsy ny fanaraha-maso indrindra ny amin’ny aro-loza amin’ny entana sy ny olona hentin’ny sambo. Noho izany dia hisy drafi- panovana apetraka manomboka izao amin’ny fanarahamaso ny seranana, ny sambo, ny tatsambo ary ny fitaterana an-dranomamy. Tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny Antokon-draharaha misahana ny Fitaterana an-dRanomasina sy ny Ranomamy (APMF) eo anivon’ny ministeran’ny Fitaterana sy ny fizahan-tany ary ny famatarana ny toetrandro. Nanambara ny Tale Jeneralin’ny APMF, Le Capitaine de Vaisseau Jean Edmond Randrianantenaina fa dieny izao dia tokony efa mijery akaiky ireo tompon-tsambo sy izay mampiasa sambo rehetra ny amin’ny tsy fanarahan-dalàna nataony indrindra eo amin’ny taratasy rehetra mahakasika amin’ny fampiasaina izany ary hanao laharam-pahamehana ny fanarahana ny fenitra ny amin’izany . Hojerena akaiky ihany koa hoy izy ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny aro loza (norme de sécurité). Hihamafy ny fanaraha-maso ataon’ny APMF amin’ ireny antontan-taratasy sy fitaovana izay tokony hananan’ny sambo ireny mba hiarovana amin’ireo loza rehetra mety hitranga hoy hatrany ny Tale Jeneraly. Rariny ihany koa izany satria misy akony ary manana anjara toerana lehibe eo amin’ny toekarem-pirenena ny fitaterana an-dranomasina sy an-dranomamy eto Madagasikara.